•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgcobo Lihle Wandile ozalwa nguLondeka Precious ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaShezi Thandeka ozalwa u Shezi Dumazile ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaFunda Minenhle Siyamthanda ogama lakhe ngu Mandla Mkhasibe ozalwa ngu Funda Thandeka Nompumelelo ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgcobo Ndumiso beno Wendy abazalwa nguNgcobo Busisiwe owokuzalwa eSnathing ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgubane Lusanda ozalwa nguDuduzile Constance owokuzalwa eSnathing. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Ubaba kaDlamini Nosipho ozalwa nguDlamini Pretty Lindiwe ozalelwe eDambuza ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaShelembe Snikeziwe ozalwa nguShelembe Snikeziwe Faith ongowokuzalwa e Dambuza ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaMasikane Ndumiso, Luyanda beno Ayanda ogama lakhe ngu Gwala Mthokozisi abazalwa nguMasikane Bonisiwe Xolile ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaNdlovu Andile beno Anele azalwa nguNdlovu Bongekile ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaCebekhulu Mnqobi ozalwa nguCebekhulu Bonakele wase Willowfountein ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaMhlongo Siqiniseko ozalwa nguMhlongo Makhosazane wase Willowfountein ongasekho emhlabeni.
•Abazali baMakhaba Selo owokuzalwa eDambuza.
•Umama kaPhewa Sanele wase Willowfountein ozalwa nguMhlongo Sibongiseni ongasekho emhlabeni.
•UMkhize Ntombenhle wase Dambuza ongumama ka Mkhize Andile obaba wakhe kunguNgidi Sbonelo ongasekho emhlabeni.
• Abazali baMkhize Bandile owokuzalwa eDambuza.
•Abazali baMoeketsi Eketsang ozalwa ngu-Andiswa Chawe Wase Dambuza.
•Ubaba kaNdawo Siphelele beno Ndawo Sanele omama wabo kunguNdawo Khanyisile ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaMchunu Zibusiso Ibenathi omama wakhe ngu Mchunu Nonjabulo Happiness ongasekho emhlabeni.
•Ubaba kaMasikane Ndumiso omama wakhe kungu Masikane Bonisiwe Xolile ongasekho emhlabeni.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMvubu Aphelele noMvubu Ntombizanele abazalwa ogama lakhe ngukhize Mandla omama wabo nguMvubu Thobile wase Dambuza ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa abazali bakaKhumalo Amanda ozalwa nguKhumalo Thandi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNgubo Nokuphila ozalwa nguFelani Ngubo ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa umama kaNgubane Nothando ogama lakhe nguBuyisile Ngubane obaba wakhe ngu Jali Phakamani ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumed e noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa abazali baka Lembethe Olwethu. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa abazali baka Dladla Siyambonga obaba wakhe ngu Dladla Jabulani. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtokozo Ncobeni , uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni enombolweni ethi : 033 345 1857.